Rojo rojo vita amin'ny vatomamy velona
3-sosona perla vita amin'ny perila rano
Vakana vita amin'ny perla vita amin'ny rano velona voajanahary ny fehin-tànana. Fotsy voajanahary, mavokely, paiso loko ny voahangy. Ny lavany dia 8 santimetatra ary azo ahitsy ny habeny. Raha mila zavatra hafa ianao, dia afaka manome perla amin'ny rano isan-karazany amin'ny endriny isan-karazany isika, ao anatin'izany ny perila hafa loko. Azo namboarina ihany koa izy io. Raha liana ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Ny orinasanay dia manana traikefa fanaovana firavaka 20 taona mahery, ary manana traikefa sy teknolojia mahay amin'ny famokarana vatosoa, perla, firavaka volamena sy volafotsy isan-karazany.
Kitapo firavaka perla boribory mahafatifaty
Fotsy ny ankamaroan'ny lokon'ny perla Akoya sinoa. Ny vakana boribory tena misy loko mavokely no tena sarobidy. Satria kely ny haben'ny akorandriaka an'ny perila Akoya, dia somary kely ihany koa ireo perila izay ambolena, ary ny perla lehibe kokoa noho ny 9 mm dia kely kokoa ary lafo kokoa. Ny loko mahazatra dia fotsy, krema, volamena maivana ary manga volafotsy. Ny loko fototra dia manambara loko mavokely tsy manam-paharoa, izay mampamirapiratra ny vehivavy rehetra. Malemy, kanto, manonofinofy ary sarobidy izy io. Ny loko mavokely mavokely tsy manam-paharoa dia mahatonga ny tsiro miavaka maro hanana toerana malefaka amin'izany.
Fehiloha Voahangy Rano 7mm boribory, Fehin-tànana Voahangy Mainty
Ny perla blackwater dia iray amin'ny voahangy vita amin'ny loko, izay manolo ny tsy fisian'ny loko perla voajanahary voajanahary. Ny vakana volamena dia mahatonga ny fehin-tànana tsy tsotra loatra, mandritra izany fotoana izany dia tsy hianjera ny perla fanamboarana. Ny bracelet dia vita amin'ny perla rano madio 7mm boribory ary 925 volafotsy, volamena nambolena, mahatonga ny loko tsy ho mifanohitra loatra. Mainty ny perla, fa toa volom-borona avy lavitra. Ny loko mahafinaritra dia mety hahasarika ny mason'ny olona ao anatin'ny indray mipi-maso.
Volom-boahangy vita amin'ny rano mangatsiaka vita amin'ny akorandriaka vita amin'ny volom-boninkazo vita amin'ny Voninkazo Voahangy & Volom-boninkazo Volom-boankazo Zircon voninkazo ho an'ny vehivavy
Ity paosy brooch ity dia vita amin'ny perla voajanahary voajanahary, perla ary varahina. Ny endrika voninkazo tsara tarehy dia manampy ny fahalemem-panahin'ny mpitafy azy. Ity paosy brooch ity dia tena mety amin'ny lohataona. Rehefa sitrana ny zava-drehetra dia mifameno ireo voninkazo sy zavamaniry brooch, toy ny hoe mifamaly izy ireo fa tonga ny lohataona. Ity paosy brooch ity dia mampiasa vakana voahangy bokotra, izay maneho tanteraka ny hatsaran'ny perla nefa tsy mandratra azy ireo. Ny perla sy ny felana dia saika atambatra, izay mahatonga ny olona tsy mahay manavaka.
26-29mm Volo voajanahary voajanahary vita amin'ny ranom-boasary Biwa
Ny anarana hoe vakana Biwa dia avy amin'ny farihy Biwa any Japon. Ireo perla novokarina tao amin'ny Farihy Biwa dia antsoina matetika hoe vakana Biwa. Na izany aza, noho ny fandotoana be ao amin'ny ranon'ny Lake Biwa any Japon, amin'ny ankapobeny dia tsy misy perla azo ambolena intsony avy amin'ny Farihin'i Biwa.
Any Sina, voahangy isan-karazany no ambolena, ary iray amin'izany ny perla biwa. Lava sy mahia ny vatan'ny vatany, izay hita miharihary ary ny tombony azo raha oharina amin'ireo karazana perla orisinaly na boribory lavalava. Azonao ampiasaina amin'ny firavaka DIY amin'ny endriny isan-karazany izany, ny hatsarany dia tsy mitovy amin'ny perla hafa, ary mahavariana ihany koa
Voahangy voahangy manodidina ny 7-7.5mm Voahangy
Satria voahangy tsy misy nosy ireo vatosoa velona, ​​dia hisy fiatraikany ivelany kokoa mandritra ny fitomboany. Misy perla miendrika tsy ara-dalàna maro. endrika ankapobeny dia boribory, boribory lavalava, bokotra, miendrika vary, endrika voatabia, miendrika manokana, sns. Anisan'izany ny perla boribory latsaky ny 5% amin'ny totalin'ny perla vokariny. Ny perla boribory lavorary sy tsy misy kilema eo ambanin'ny hazavana mahery dia tena iray amin'ny an'aliny, ka ny sandan'ny perla rano velona dia mbola avo be. Ara-dalàna tokoa raha ny perla rano velona madio kalitao iray dia mety ho an'arivony maro na an'aliny mihitsy aza.
Ny perla amin'ny rano velona dia manan-karena loko, fotsy amin'ny ankapobeny, paiso, mavokely, volomparasy sy loko voajanahary hafa, ary malama ny tampon'ny perila ary malefaka ny famirapiratana, hita taratra amin'ny toetran'ny vehivavy tatsinanana izany.
Kitapo miendrika volo fotsy mavokely miloko mavokely ho an'ny firavaka vita amin'ny firavaka 9-10mm Voahangy rano madio tsy misy lavaka
Tena perla Mabe io. Ny loko dia voajanahary. Na dia malama tsara aza ny tampony, dia mety ho hita mazava tsara eo ambanin'ny hazavana mahery ny firakotra sasany, ary manampy endrika hafa hatsaran-tarehy ireo firakofana ireo. Ny fanaovana azy ho kojakoja fitafiana dia hanampy fanasongadinana ny akanjo, tsotra nefa tsy misy fotony. Ary ny habeny dia lehibe ho an'ny perla mabe koa, afaka hahatonga anao ho teboka ifantohana. Ary tsy mitovy amin'ny perla akory izy io, mety tsara ho an'ny olona manana fikorontanan-tsaina mahasosotra ihany koa io, ho an'ny vao manomboka DIY
Fehin-tànana Voahangy vita amin'ny tànana velona
Ity bracelet ity dia natao hisokafana, noho izany dia mety tsara ho an'ny rehetra ny mitafy azy, ary tsy hahatonga ny olona hahatsapa ho tery. Ny kojakoja vita amin'ny perla dia manampy ny hakantom-behivavy azy io ary mahatonga ny fehin-tànana ho tsy mitokana. Nampitandrina kely ireo perla roa teo akaiky teo. Na dia mamadika ny tananao aza ianao ary mahazo zavatra, ny hafa dia afaka mahatsikaritra izany firavaka miraviravy ambany izany amin'ny indray mipi-maso.
Mazava ho azy, azo soloina loko hafa koa amin'ny perla hafa, toy ny mavokely, volomparasy sy paiso, izany dia mifototra amin'ny safidin'ny tena manokana. Fa mijery ihany koa ny olan'ny fampifanarahana loko.
16mm Voahangy Rano Voahangy Rano
Ny perila Edison dia voahangy kolontsaina mikraoba mikraoba, izay lehibe kokoa noho ny perla mahazatra. Ny savaivony sy ny famirapiratany dia manakaiky ny voahangy miorina amin'ny ranomasina, ary i Edison amin'ny ankapobeny dia kolontsaina tsy mihoatra ny telo taona, toy izany koa manana loko manankarena sy vidiny mora an'izay tsy manana perla rano velona mangarahara. Saingy tsy ny perla Edison rehetra dia boribory lavorary, ny ampahany lehibe amin'izy ireo dia hitombo endrika Baroque, ny boribory lavorary misy kilema vitsy dia vitsy.
Fa lesoka mahafaty no mahatonga azy tsy raisina tsara! Rehefa avy niakanjo nandritra ny fotoana iray dia hiseho milahatra tsara ny velaran'ny sosona perila an'i Edison. Lasa tsy malama intsony ny velaran-perila ary very ny famirapiratany ary maloka ny lokony.
Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Kavina Stud Perla, Aaa Voahangy Rano, Kavina fampakaram-bady, Voahangy marina anaty rano velona,